The lekisa iirhafu
Inyoni yolondolozo lwemihla
Uluhlu lokuhlola uluhlu lwePeter
Lawula abaphili bezempilo
Nika isandla kwiAvibase
Amalungu eqela leFlickr
I-Avibase ifumaneka ngeelwimi ezilandelayo:
Nika inguqu engcono
Ukuguqulwa kweli phepha kwagqitywa ngoncedo lwe-Google toolkit yokuguqulela. Nika inguqu engcono
Wamkelekile WeNdwendwe | Ngema | Bhalisa | | MyAvibase | Phuma
Umgaqo-nkqubo wabucala we-Avibase
I-Avibase yiwebhsayithi engabonakaliyo eCanada, enikezelwe ngokuyinhloko ukuqokelela nokwabelana ngolwazi ngeentaka zehlabathi. I-Avibase ayiqokeleli okanye isebenzise ulwazi lomntu malunga nabasebenzisi bayo kunye neendwendwe ngenjongo zorhwebo. Nangona kunjalo i-doe iqokelela ulwazi oluthile olulisebenzisayo ngeendlela ezilandelayo.
Okokuqala, kumaphepha adinga ukuqinisekiswa komsebenzisi (ukungena ngemvume kunye nephasiwedi, njenge-MyAvibase kunye ne-Avibase yeenkonzo zewebhu), sigcina i-cookie ehlala kuphela kwikhompyutha yakho ngenjongo yokugcina iseshoni. Ukuba udala i-Avibase profile yakho, igama lakho, idilesi ye-imeyile, ulwimi kunye nezinye izinto ezikhethiweyo, kwakunye neenlist zakho zokubonwa ezihambelana neenkcukacha zakho zokukhangela, ziya kugcinwa kumaseva ethu. Le ngcaciso ayiyi kubelwa kunye nabasithathu kwaye isetyenziswe kuphela ngenjongo yokukukhetha ngexesha lokusebenzisa i-Avibase site. Igama lakho liyakuboniswa kwiziphumo zomntu (umzekelo, ababonisi abaphezulu babika), kodwa unokucela ukuba ungabandakanyi igama lakho kwiprofayili yakho. Unako kwakhona, nangaliphi na ixesha, susa iprofayili yakho kunye nayo yonke idatha edibeneyo, ngokuya kwiprofayili yakho ye-Avibase kwaye ukhetha "Susa ifayile".
I-Avibase iphinda isebenzise i-Google Analytics, inkonzo ye-analytics yewebhu eyenziwe yi-Google, Inc. I-Google Analytics isebenzisa ii-cookies, ezifayile ezifakwe kwikhompyutha yakho, ukunceda iwebhusayithi ukuba ihlalutye indlela abasebenzisi basebenzisa ngayo indawo. Ulwazi oluveliswe yi-cookie malunga nokusebenzisa kwakho iwebhusayithi (kubandakanye idilesi yakho ye-IP, nangona oku kufuneka kupheleliswe ngenxa yokuba sithembele kwi-IP ye-anonymous feature feature) iza kuhanjiswa kwaye igcinwe yi-Google kumaseva e-United States. I-Google izakusebenzisa le ngcaciso ngenjongo yokuvavanya ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi, ukuqokelela iingxelo kwi-website yomsebenzi wabasebenzisi bewebhu kunye nokubonelela ngeenkonzo ezinxulumene nomsebenzi wewebhu kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi. I-Google ingaphinde idlulisele le nkcazelo kumaqela asithathu apho kufuneka ukuba wenze njalo ngomthetho, okanye apho abo bantu abathathu beqhuba ulwazi kwiGoogle. I-Google ayiyi kudibanisa idilesi yakho ye-IP kunye nayiphi na enye idatha egcinwe yiGoogle. Ungayenqaba ukusebenzisa ikhukhi ngokukhetha izicwangciso ezifanelekileyo kwisiphequluli sakho, nangona kunjalo nceda uqaphele ukuba xa ukwenza oku ungenako ukusebenzisa usebenze ngokugcwele kweli bhsayithi. Ngokusebenzisa le website, uyavuma ukucwangciswa kwedatha ngawe nge-Google ngendlela kunye neenjongo ezikhankanywe ngasentla.
Ngokubanzi ndizama ukuvuma ngegama lonke abaxhasi bancede kundithucula i-Avibase kwiminyaka. Ukuba igama lakho livela kwiimvume, kodwa ungathanda ukususa, nceda xhumana nam . Ukuba uvakalelwa kukuba igama lakho kufuneka libe khona, nceda undixelele, oku kuqinisekileyo ukuba ngongamela kum (inxolopho yam!).
I-Avibase yi-copyright kaDenis Lepage. Imvume inikezelwa ngokuthe ngqo ukuba wenze unxibelelwano nakweliphi na iphepha lale ndawo, kubandakanywa, kodwa kungaphelelwanga, iincwadi zokuhlola kunye neeprogram zeprogram.
Iifoto nemifanekiso eboniswe ngaphakathi kwe-Avibase bonke baxhomekeke kwi-copyright yomlobi wabo wokuqala, ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela ngokusebenzisa uphawu lwelayisenisi yokudala. Zonke iifoto eziboniswe kwi iFlickr API zihlala ziyimpahla yabanikeli babo bokuqala. I-Avibase ayigcinanga i-cache yendawo yeefoto ukusuka kwi-API, kodwa igcina kuphela iikhonkco kwiinguqulelo ze-thumbnail. Zonke iifoto ziquka igama lomlobi (njengoko kunikezelwe kwiFlickr) kwaye zidibene nephepha lomlobi kwiFlickr. Iifoto kuphela ezimakwe kwi uphando loluntu ngababhali babo ziboniswa kwi-Avibase. Oku kuqhelekileyo isilungiselelo esingagqibekanga kwiFlickr, esinokutshintshwa ngumnini-akhawunti.
Ukuba ungumfoto we-akhawunti yeFlickr, kwaye ungathanda ukucela ukuba iifoto zakho zingabonakaliswa njengezithonjana kwi-Avibase, ubuncinane ubuncinane ezimbini. Okokuqala, unakho ukunxibelelana nam ukucela ukuba iifoto zakho zingabonakaliswa, kwaye ndiya kuvuya ukunyanzelisa ngokukhawuleza njengoko ndinako. Xa wenza njalo, nceda unikezele ngegama lakho le-akhawunti ye-flickr, ngoko ndiyakwazi ukuchonga nokuseka ifayile yokukhusela iifoto zakho ukuba ziboniswe. Inketho yakho yesibili kukutshintsha indawo yokubonisa enye okanye zonke iifoto zakho ukuze zingabikho kwi uphando loluntu . Oku kungenziwa emhlabeni jikelele kwi-akhawunti yakho yeFlickr, ngaphantsi kwe Ubumfihlo kunye neemvume , okanye nganye kwisithombe ngasinye. Emva kokutshintsha oku kulungiselelwa, iifoto zingaboniswa njenge ezingekho kwi-Avibase, kwaye ekugqibeleni ziyakususwa ngokupheleleyo.
Iifoto ezisuka kwi-Avibase banner zisetyenzisiwe kunye nemvume evela kubanikazi babo be-copyright, abaqhelekileyo ngokuchongwa ngokugxotha imouse yakho ngaphezu kwezithombe okanye ukuchofoza kwisithombe.
Imvume yokusebenzisa nayiphi na iifoto eziboniswe kwi-Avibase ayikwazi ukunikezelwa kum kwaye kufuneka icelwe ngqo kumnini-copyright. Ezinye zeefoto zeFlickr ziyafumaneka ukuze zisebenzise phantsi kweLayisensi yeCreative Commons, kodwa luxanduva lwakho njengomsebenzisi ukuqinisekisa ukuba yiyiphi na ukuthobela imiqathango yelayisenisi ethile. Le ngcaciso ifumaneka kwisayithi yeFlickr xa ucofa umfanekiso.
Ukuba unemifanekiso ongathanda ukuyifumana kwi-Avibase, konke okufuneka ukwenze yenze ezo zithombe zifumaneke kwi-akhawunti yeFlickr, kwaye uqinisekise ukuba iprofayile yakho ivumela ukukhangela kwangasese.
Ukuba ungathanda ukubika isithombe esingalunganga esiboniswe kwi-Avibase, indlela efanelekileyo ukuba ucofa iqhosha elincinane lesikwere kuboniswe kwikona elisezantsi ngaphantsi kwezithombe. Ukusetyenziswa kweli qhosha kufuneka kugqitywe ukungazi kakuhle kunye neefoto ezingabonakali iintaka. Naliphina iifoto ezigqityiweyo ngale ndlela ziya kugqitywa kwakhona kwaye zisuswe xa zifanelekileyo. Ukuba unqwenela, unako ukunika ivoti kunoma yisiphi isithomo ngokuchofoza kwibharki engezantsi kwesithombe. Amanqaku omlinganiselo wokuvota kude nakwezinye iindwendwe (xa kusebenza) iboniswa ngezansi kweefoto. Ekugqibeleni, ungasebenzisa inkinobho yokucoca, kwicala elingezantsi lasekunene, ukutshintsha isithombe kwisinye esikhethiweyo esisodwa kwiintlobo ezifanayo.
I-Avibase iye ya tyelelwa 279,279,450 amaxesha ukususela ngo-24 Juni 2003. © Denis Lepage | Umthetho wabucala